Ebe ntụrụndụ atọ na Seychelles Islands | Akụkọ Njem
Ebe ntụrụndụ atọ na Seychelles Islands
Mariela Carril | | Agwaetiti Seychelles
M na-eme atụmatụ m ọzọ ezumike na mgbe okodu ọtụtụ na oyi ebe m chọrọ a osimiri ebe. Ebe izu ike bụ ebumnobi bụ isi, ebe njem nwere oke mma, ọdịda anyanwụ na ọrụ klaasị mbụ.
Nha ahụ Àgwàetiti Seychelles? Mgbe ọ bụla m na-eme njem site na Emirates, m na-agbakwuru ndị na-agafe na Dubai ụbọchị ole na ole wee gaa Seychelles. O doro anya na ọ bụghị ebe dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ọ bụ Honeymoon ma ọ bụ ncheta ọ ga-abụ ... Ọ bụ oge maka ezumike nrọ. Ya mere, lee ebe ntụrụndụ atọ dị na Syechelles.
1 Agwaetiti Seychelles
2 Akwụkwọ akụkọ Le Château De Feuilles
3 Fregate Onwe nke Onwe
Ọ bụ agwaetiti mebere agwaetiti 115 n'otu akụkụ nke ọmarịcha Indian Ocean Ogologo kilomita 400, ogo ole na ole n'ebe ndịda nke ikuku. E nwere agwaetiti buru ibu ma pere mpe, ụfọdụ coral, ndị ọzọ nwere nnukwu okwute.
The Seychelles na-ahuru ka a okomoko ebe O zuru ezu ịmara ụlọ oriri na nkwari akụ ha ka ha daba, ma a ghaghị ikwu na n'ofe ntụrụndụ ọ bụ nnukwu ọhịa ndụ ebee.
Akwụkwọ akụkọ Le Château De Feuilles
Ebe a dị n'agwaetiti praslin, agwaetiti granite nke bụ agwaetiti nke abụọ kachasị na mba ahụ. Nke a bụ Valle de Mai, saịtị bụ ebe ihe nketa ụwa maka oke ọhịa aki oyibo ya. Ebe ezumike dị kpọmkwem na Pointe Cabris na enwere ike iji ụgbọelu si Mahé rute, na njem naanị oge 20 naanị na-apụ ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. I nwekwara ike ime njem site na helikopta.
Ọ bụ obere obere na ibu nanị ụlọ n'ihi na ọ nwere naanị ime ụlọ itoolu na ime ụlọ ekewa n'etiti ndi no n'ime château na ndi no n'ime bungalow nke di na mpaghara. E nwere ụlọ iri ise na ime obodo nwere ime ụlọ abụọ. Nwere ise kpakpando Atiya na Seychelles ọ bụ naanị ụlọ nke ndị ụwa ama ama Relais & Châteu.
Ebe ezumike ahụ na-eleghara St. Anne's Bay anya na ọ bụ ihe ihunanya, zuru oke maka di na nwunye. O nwere agwaetiti dị nso, Grande Soeur, nke enwere ike ịgbazite iche iche ma ọ bụ nwee obi ụtọ na ngwụsị izu. Osisi nkwụ, orchid, okooko osisi okpomọkụ na nnụnụ gbara ya gburugburu. N’ebe a, anakpo Osimiri Indian di n’elu mmiri na-acha anụnụ anụnụ. A na-ahụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ya kacha mma na Seychelles ma na-enye nri ụtụtụ zuru ezu, nri ehihie à la carte na nri abalị.
Ọzọkwa awade spa ọrụỌ na-arụ ọrụ n'elu ugwu ka echiche ya dị ebube. O nwekwara jacuzzi panoramic nke ị nwere ike ịhụ n'oké osimiri, agwaetiti iri na abụọ gbara ya gburugburu na mmiri. Cheedị nke ahụ na onye òtù ọlụlụ gị! Ego ole ka ebe a magburu onwe ya na-efu? Kedu ọnụego gị? Ọ bara uru ịkọwapụta na ị nwere ike ịgbazite ọrụ ahụ na nri ụtụtụ gụnyere ma ọ bụ ọkara osisi (ụdị nke ihe niile), nke anaghị etinye ihe ọ drinksụ drinksụ.
Na nri ụtụtụ naanị ọnụego sitere na 473 euro na 806 euro, dabere na ụlọ. Na ọkara osisi ha sitere na euro 611 ruo euro 944 Kwa abalị kwa onye. Ọnụahịa ndị a bụ enweghị ụtụ isi (15%) na ọrụ (10%), yana opekata mpe abalị atọ. Ha gụnye ego mgbazinye nke ụgbọ ala, akwụ ụgwọ mkpuchi yana iche iche) na njem ụbọchị gaa agwaetiti Grande Soeur.
Fregate Onwe nke Onwe
Agwaetiti a dị n’ebe ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ Mahé, agwaetiti nke agwaetiti. Ọ bụ agwaetiti a na-apụta n’oké osimiri con asaa mara mma osimiri, nkeonwe nke na nduru na-ahọrọ ha ka ha na-amụpụta ma n'oge ndị ọzọ Arab na-eji ya agbaba. Site na Mahé ị banyere n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ helikọpta n'ime nanị nkeji iri abụọ.
El mgbagwoju nwere ulo 16 nke a na-ewu n’elu mkpọda otu akụkụ agwaetiti ahụ. Ha jikọtara ya n'ụzọ site na ọdụ ụgbọ mmiri na ụlọ oriri na ọ theụ restaurantụ ma ewezuga owuwu ndị a, agwaetiti ndị ọzọ fọdụrụnụ. Nke ahụ nwere uru na ọghọm ya. Dika aka mmadu adighi adi ugbua, a na-ewere mbe na-achi osimiri ndi ahu ma hey… odi otua. Ihe mgbagwoju anya bu ezigbo ya ọdọ mmiri dị iche iche maka ụlọ obibi ọ bụla na nkọwa zuru ebe niile.
Obodo obula nwere a nanị belNwere ike ịga mmiri mmiri, ịkụ azụ n'ime mmiri, sọọfụ, kayak, ma ọ bụ egwuregwu mmiri ndị ọzọ. Enwere mgbatị ahụ, ụlọ mmanya, WiFi na spa. Spa a nọ n'ọnọdụ mara mma, nke nwere nnukwu echiche ma nwee ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ngwaahịa ndị a bụ ihe okike, dịkwa ka ihe eji eri nri, nke na-abawanye na agwaetiti ahụ.
Gwọ Dị oke ọnụ. Ahụla m ọnụego nke 4700 euro kwa abalị...
North Island bụ ihe ọzọ agwaetiti granite nke dị nso na Mahé. Ọ dị naanị square kilomita 2 na mpaghara O yikwara ka ị na-ese n'elu mmiri n'Oké Osimiri India. Ọ bụ naanị helikọpta ruru ya zuru okè maka ndị hụrụ okike n'anya.
Obodo ukwu kachasị na-atụle mita square 450 ma ha dị oke oke, chọọ ya mma n'ụdị colonial, jiri osisi na owu dị ọcha. Villas 1 ruo 10 bụ ime ụlọ abụọ ma Villa 11 bụ nke kachasị ukwuu ma bụrụ maka ndị di na nwunye. E ji osisi nke osisi mee ya na Ha nwere ọdọ mmiri nke ha ma chee ihu n’akụkụ osimiri. Ihe mgbagwoju anya nwere obi nke bu ebe enwere udi uzo ma ogwe osisi na-eleda oke osimiri. Ọ bụ ebe a na-ezukọ ebe a na-enye nri ma ọ bụrụ na ịchọghị ha n’obodo ma ọ bụ n’akụkụ osimiri.
Ndị ọrụ ahụ na-eme ka ndị ọbịa rịa elu okpukpu abụọ ma ọ bụ ebe dịpụrụ adịpụ nke na enweghị menu na ụlọ oriri na ọ restaurantụ asụ ebe onye isi nri na-esi nri ihe ejide. Gwọ Ọ dị mma, ụlọ si na 1 ruo 10 na-eri gburugburu 2500 euro kwa abalị na villa 1 banyere 4 puku euro. O doro anya tinye nri niile, ihe ọ drinksụ drinksụ na mmanya (ma e wezụga mmanya).
Ọ gụnyekwara njem mmụta dị iche iche, kayak, ịgagharị agagharị, ịgba ịnyịnya ígwè, ụbọchị ịkụ azụ, ịsa akwa NA WiFi na iji ụgbọ mmiri na-esi ebe a gaa ebe ahụ.
Na hotels dị ka nke a, echere m na ihe m na-enwerekarị anya bụ otu nde mmadụ bụ kpọmkwem ihe anya ha pụrụ ịtụgharị uche. Chetụ n'echiche ụbọchị ole na ole n'ime paradaịs ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Agwaetiti Seychelles » Ebe ntụrụndụ atọ na Seychelles Islands
Ebe gburugburu ụwa usọrọ St. Patrick St.bọchị
Isi ebe na nleta na Victoria, Australia